Iindaba -Uzisebenzisa phi iinxalenye zeplastiki
Iiplastiki zenziwe ngokubumba kunye nezinye iindlela zokulungisa, apho ubukhulu kunye nomsebenzi uhlangabezana neemfuno zabaqulunqi.
Ngaphezu kwe-80% yamalungu eplastiki abunjwe ngenaliti yokubumba, eyona ndlela iphambili yokufumana iindawo zeplastiki ezichanekileyo.
Inaliti yeplastiki kunye neemveliso zingene kuyo yonke imiba yemisebenzi yabantu, isetyenziswa ngokubanzi kunxibelelwano lwe-elektroniki, izixhobo zombane, umbane, isixhobo, ukhuseleko, ukugcwala kweemoto, ukhathalelo lonyango, izixhobo zobomi bemihla ngemihla kunye nezinye iinkalo.
Iindidi zemveliso eziphambili zezi:
1. Unxibelelwano lweemveliso ze-elektroniki kunye neelektroniki zabathengi (izindlu zeplastiki, indawo ebiyelweyo, ibhokisi, ikhava)
Iifowuni eziphathwayo, ii-headphone, oomabonakude, iifowuni zevidiyo, oomatshini bePOS, intsimbi yokungena emnyango.
Izixhobo zombane (iplastikhi, ikhava, isikhongozeli, isiseko)
Umenzi wekofu, i-juicer, ifriji, isixhobo sokupholisa umoya, isher fan kunye ne-oven microwave.
3. Izixhobo zombane
Imitha yombane, ibhokisi yombane, ikhabethe yombane, isiguquli sokuhamba rhoqo, isiciko sokugquma kunye nokutshintsha.
Isixhobo (izindlu zeplastiki, ikhava)
I-Voltmeter, i-multimeter, i-barometer, isixhobo sokujonga ubomi
5. Iindawo ezizenzekelayo
Isakhelo somzimba wedashboard, isibiyeli sebhetri, imodyuli engaphambili, ibhokisi yolawulo, isakhelo senkxaso yesihlalo, indawo yokugcina isithuba, i-fender, i-bumper, ikhava ye-chassis, isithintelo sengxolo, isakhelo somnyango esingasemva
Iindawo zeplastiki zemoto
6. Isixhobo sezithuthi kunye nezixhobo zeZithuthi (isiciko sesibane, indawo ebiyelweyo)
Isibane somqondiso, umqondiso, umvavanyi wotywala,
7. Unonophelo lwezonyango kunye nolwezempilo
Izibane ezisebenzayo, i-sphygmomanometer, isirinji, i-dropper, ibhotile yeyeza, i-massager, isixhobo sokususa iinwele, izixhobo zomzimba
8. Izinto eziyimfuneko imihla ngemihla
Izitulo zeplastiki, iibrashi zamazinyo zeplastiki, izitya zeplastiki, iibhakethi zeplastiki, iplastiki, iikomityi zeplastiki, iiglasi, izembozo zangasese, amachibi, iithoyi
Iimveliso ezahlukeneyo zifuna ubungakanani obahlukeneyo, iimilo, ukusebenza, ukubonakala kunye nokusetyenziswa, ke kukho iintlobo ngeentlobo zokubumba kunye neenkqubo zenaliti yokubumba ezisetyenziselwa ukuzenza.
I-Mestech ineminyaka engaphezu kwe-10 yokuveliswa kwenaliti kunye namava okuvelisa inaliti, sinokukunika ukubumba ngenaliti kunye neemveliso zeenaliti kunye neenkonzo ngokwendlela yakho.
1. I-ABS, iPC.PMMA.PVC.PP.NYLON, TPU.TPE
2. inaliti yokubumba iinxalenye ezincinci, iinxalenye ezinkulu, imisonto, iigiya, amaqokobhe, imibala emibini, kunye nokufakwa kwesinyithi ukubumba.
3. Ukwaleka okanye ukuhombisa umphezulu: ukuprinta kwesikrini, ukupeyinta isitshizi, ukucoca umbane, ukuhombisa ukungunda ngaphakathi, ukuprinta ukuhambisa amanzi.
Ukuba ufuna iimveliso zeplastiki zeemveliso zakho, okanye ufuna ukwazi ngakumbi, nceda unxibelelane neMestech malunga nekoteyishini okanye ulwazi oluthe kratya.